Aqoon isweydaarsi - Dongguan Walley Makiinado Teknolojiyadeed Co., Ltd.
Aqoon isweydaarsiga makiinadda CNC
Voelry qalabaysan oo si fiican u abaabulan aqoon isweydaarsiga CNC machining, kaas oo la kulmi kara awoodda sii kordheysa ee macaamiisha iyo shuruudaha tayada ee alaabada. CNC 4-dhidibka machining iyo mashiinka CNC 5-dhidibka waa ku habboon yihiin qaybo machining adag, hoos u qabashada soo noqnoqda, iyo hubinta tayada wax soo saarka; Iyada oo loo rogo loona shiidayo qalliinka adag, qaybo adag ayaa la dhammaystiri karaa.
Aqoon isweydaarsiga latheynta CNC
Aqoon isweydaarsiga CNC lathe wuxuu ku habboon yahay soo saarista dhammaan noocyada qalabka qalabka saxda ah, sida qaybaha saxda ahama ee birta, qaybaha saxda ah ee aluminium, qaybaha saxda ah ee aluminium; Mashiinka lathe CNC wuxuu la kulmi karaa shuruudaha mashiinka ee alaabooyinka waaweyn ee saxda ah, Mashiinka otomatiga-lathe wuxuu ku habboon yahay soo saarista qaybaha mashiinka saxda ah, sida qaybaha saxda ah ee dhaadheer, qalabka wax soo saarka saxda ah, iwm.
Iyada oo aqoon-isweydaarsiyo badan oo saxan shaabbad siman ah laga bilaabo 30T ilaa 200T, waxaan ku guuleysan karnaa baahiyaha mashiinnada saxda ah sida shaabad joogto ah, shaabbad xawaare sare leh, iyo shaabad ku shaqeynta hidda, iwm.
Aqoon isweydaarsiga ku saabsan moduleka shucaaca
Qalabka wax lagu kala iibsado ee kuleylka kuleylka ah waa sheyga ugu weyn ee shirkadda sanado badan, habka wax soo saarka qaangaarka ah, qadka isku imaatinka oo dhameystiran, iyo xakamaynta aagga heerkulka 10 ee qadka dib u bixinta si loo hubiyo waxqabadka xasilloon ee moduleka kuleylka.
Waxaa jira noocyo badan oo hiitarka, oo ay kujiraan radiators taxane wareega qulqulka iyo radiators taxane wareega. Wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah radiators-ka loo yaqaan 'LED radiators, CPU radiators, radiators Security, radiators electronic, radiators inverter, iwm